Ungenza kanjani unogwaja nge-Fimo noma nge-polymer clay - ISINYATHELO NGESINYATHELO | Imisebenzi yezandla ivuliwe
Indlela yokwenza unogwaja nge-Fimo noma nge-polymer clay - ISINYATHELO NGESINYATHELO
Kulokhu Ukufundisa Ngikufundisa ukumodela a unogwaja con UFimo o ubumba lwe-polymer. Kuhle ukuhlobisa igumbi lezingane, izingane zidlale nazo, noma zisebenzise njengomhlobiso wamapensela noma ozimele bezithombe.
2 Igxathu emvakwe gxathu
Ukwenza unogwaja uzodinga UFimo o ubumba lwe-polymer, kulokhu sizosebenzisa okulandelayo imibala:
Ngaphezu kwalokho, uzodinga nokulandelayo izinto:
Upende omhlophe we-acrylic
Upende omnyama we-acrylic
Igxathu emvakwe gxathu
Ukuze wenze unogwaja onefimo ake siqale ukudala ifayela le- ikhanda futhi i umzimba. Yenza ibhola elimhlophe bese uligoqa ngentende yesandla sakho uye emuva naphambili, ngaleyo ndlela wakhe uhlobo lwesilinda oluzoba yinhloko. Okomzimba, ngemuva kokwenza ibhola futhi ngenye ingxenye emhlophe, gingqa ohlangothini olulodwa lwalelo bhola ukuze kulolwe ingxenye eyodwa kuphela, ngale ndlela uzokwakha ithonsi. Hlanganisa izingxenye zombili, ushiye udoti ongezansi nesilinda ngaphezulu.
Manje sibeka izidladla. Ukuze wenze lokhu, kufanele wenze amabhola amhlophe alinganayo amabili, bese uwagoqa ohlangothini olulodwa ngomunwe wenkomba ukuze acijwe futhi kube nethonsi elifana naleli esilenzele umzimba, kodwa kancane. Namathisela ngapha nangapha ngohlangothi olubukhali phansi esiswini sikanogwaja, bese uwacabalele ukuze angabi bukhulu kakhulu.
Sizokwenza i- izindlebe enkulu. Thatha amabhola amabili amhlophe futhi bese wenza amaconsi amabili njengemilenze, kepha kulokhu weluleke kakhudlwana. Zigcwalise kancane ngaphambi kokuzinamathisela bese uzishiya lapho ngaphandle kokuzifaka okwamanje.
Sizokwenza ingxenye yangaphakathi ye- izindlebe ku-fuchsia pink. Landela ngqo izinyathelo ezifanayo esivele sizenza ngombala omhlophe, kepha kulokhu nge-pink kanye nezicucu ezimbalwa ezimbalwa. Namathisela amaconsi abomvana ngaphezulu kwalawa amhlophe, uwafake ekhanda likanogwaja. Njengemininingwane, ungagoba enye yezindlebe kancane.
Ku umfana sizobeka i- amehlo ukwenza izimbobo ezimbili nge-awl, futhi kuzo sifaka amabhola amabili amnyama. Ngopende omhlophe, penda amachashazi amabili emehlweni ukulingisa kukhanye. Okwe ikhala futhi i umlomo Sizosebenzisa nopende, kulokhu kube mnyama, futhi sipenda ichashaza nemengamo emibili sengathi kumamatheka kuphuma kuyo.
Sidinga ukubeka i umsila. Yenza ibhola lokukhomba bese ulinamathisela ngemuva.
Futhi sizokwenza unogwaja wethu wenziwe noFimo. Le yi umphumela.
Indlela ephelele ye-athikili: Imisebenzi yezandla ivuliwe » Yezandla » Indlela yokwenza unogwaja nge-Fimo noma nge-polymer clay - ISINYATHELO NGESINYATHELO
Ukubhala umnikazi wamakhandlela, kusetshenziswe kabusha imbiza yamakhandlela enephunga elimnandi